Ikhaya eliNcinci leTuki Tuki eliZinzileyo - I-Airbnb
Ikhaya eliNcinci leTuki Tuki eliZinzileyo
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAsh
Indlu encinci ye-Tuki Tuki sisilayidi esinobuhlobo be-eco yeparadesi ifanelekile kwisibini sokubuya, i-honeymoon, i-Baby-moon okanye ithuba lokuphinda ubuyisele. Emva kokuhamba ekuseni, zithele ikomityi yekofu, wenze isidlo sakusasa esiphekiweyo kunye namaqanda amatsha asuka efama.
Emva kwesidlo sangokuhlwa, zigalele iwayini kwaye uphume phandle uyonwabele ukutshona kwelanga kwidesika okanye kubuntofontofo bebhafu yakho yentsimbi.
Ukuba ukhe wazibuza ukuba kunjani ukuhlala encinci kodwa ngesitayile lithuba lakho eli! Kuthatha zonke iziphazamiso kude kwaye sikuvumele ukuba uthande izinto ezincinci ebomini. Ngobuninzi bezinto ezikhangayo kunye nendawo ekufutshane nawe, unokuphumla, wenze ubugcisa obuthile, ufunde incwadi. Dlala isiginkci okanye ukuzonwabisa ngaphandle kwefama ukuya kumlambo wasekhaya kunye nolwandle (iWaimarama kunye noLwandlekazi). Imizuzu engama-40 kuphela ukuhamba. I-Havelock North yimizuzu eli-15 kude, yidolophu encinci entle apho ungathenga khona ukutya kwamagcisa okanye wenze indawo yokuthenga.
Le Oak kunye neBamboo yangaphakathi yakhiwe kwikhaya eliNcinci ibekwe phakathi kwendalo kwifama esebenzayo kwiNtlambo yaseKahuranaki enembono entle yeMt Erin kunye nendalo eyingqongileyo.
Vuka kwangethuba uhambe ekuseni, unyuke iinduli ezijikelezileyo ukuya kobona kukhanya kwelanga. Ifakwe kwiNdawo yeNdalo ungangena kwindawo yokuhlambela yentsimbi yentsimbi okanye uphumle kumgangatho wokufunda incwadi okanye udlale umdlalo webhodi. Kamva, jonga ukutshona kwelanga phezu kweShedi yoBoya eNkulu eBomvu kwaye uchithe ubusuku ujonge ezinkwenkwezini. Imizuzu engama-20 phantsi kwendlela yaseKahuranaki uya kufumana, ii-wineries zasekhaya kunye neendawo zokutyela zilindile. Ngeyakho indawo yekofu yasekhaya eRed Bridge Cafe, eyona ikomityi yekofu edolophini!
Indlu encinci yeTuki Tuki yindlu encinci ezimeleyo elungele isibini esinebhedi enkulukazi ebekwe kwi-mezzanine. Indlu encinci iyilwe sithi kwaye yakhiwe ecaleni kwabakhi basekhaya iLe Workshop Tiny, yintsha kraca kwaye yenziwe ngesitayile ngaphandle kokusebenza kwigridi kunye namava okuhlaziya umphefumlo. Unikezelo lwamanzi endlwini matsha kwaye luhluzwa ngenkqubo yokwenza ukuba kukhuselekile ukusela. Ikhazimliswe kabini kwaye igqunywe kakuhle yenza ukuba indlu ifudumale ebusika kwaye ipholile ehlotyeni. Indlu iseMntla Ntshona iFacing eyilwe inedesika encinci yokuhlala yangaphandle, kwaye igcwele ngebhafu yentsimbi kunye netafile kunye nezitulo. Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi zonke ziyiplani evulekileyo eneminyango etyibilikayo etyibilikayo ukuya kumngangatho wokuhamba kwangaphakathi / ngaphandle. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ukupheka isaqhwithi. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeetawuli kunye nezinto zangasese. Kukho nendawo yokugcina izinto kunye nempahla yokuxhoma. Ngeshawari enobungakanani obugcweleyo kunye nomgangatho ukuya kwizipili zasesilingini.
Indlu yangasese ye-Compost yenye yamava egridi esetyenziswa njengendlu yangasese eqhelekileyo, awugungxuli kwaye siya kukwazisa ngokuthe ngqo ukuba isebenza njani xa ukhetha ukubhukisha.
Sijonge ngomdla ukwabelana nawe ngesi silayi sincinci separadesi.
Ubuncinci ubusuku obuhlanu bufunekayo kwixmas/kwithuba lonyaka omtsha.
Ubuncinci bobusuku obuthathu bufunekayo kwi-Ista, i-Queens Birthday, i-Weekend yezaBasebenzi kunye ne-Art Deco.
Vuka kwangentseni uhambe ngentsasa ukuya kuMlambo iTuki Tuki okanye unyuke iinduli ezijikelezileyo ukuze ufumane okona kumnandi ukuphuma kwelanga. Ifakwe kwindawo engasese ungangena kwindawo yokuhlambela yentsimbi yentsimbi okanye uphumle kumgangatho wokufunda incwadi okanye udlale umdlalo webhodi. Kamva, jonga ukutshona kwelanga phezu kweshedi enkulu yoboya obubomvu kwaye uchithe ubusuku ujonge ezinkwenkwezini. Imizuzu engama-20 phantsi kwendlela yaseKahuranaki uya kufumana, ii-wineries zasekhaya kunye neendawo zokutyela zilindile. Ngeyakho indawo yekofu yasekhaya eRed Bridge Cafe.
Indlu encinci yeTuki Tuki yindlu yeholide ezimeleyo elungele ukubaleka ethe cwaka enebhedi enkulukazi ebekwe kwi-mezzanine. Indlu encinci iyilwe sithi kwaye yakhiwe ecaleni kwabakhi basekhaya iLe Workshop Tiny, yintsha kraca kwaye yenziwe ngesitayile ngaphandle kokusebenza kwigridi kunye namava okuhlaziya umphefumlo. Unikezelo lwamanzi endlwini matsha kwaye alunaklorine, luhluzwa ngesixokelelwano esenza ukuba kukhuseleke ukuselwa. Ikhazimliswe kabini kwaye igqunywe kakuhle yenza ukuba indlu ifudumale ebusika kwaye ipholile ehlotyeni. Indlu iseMntla Ntshona iFacing eyilwe inedesika encinci yokuhlala yangaphandle, igcwele ngebhafu yentsimbi kunye netafile kunye nezitulo. Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi zonke ziyiplani evulekileyo eneminyango etyibilikayo etyibilikayo ukuya kumngangatho wokuhamba kwangaphakathi / ngaphandle. Ikhitshi ibekwe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zodidi oluphezulu. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeetawuli kunye nendawo yokugcina izinto kunye nempahla yokuxhoma. Ngeshawari enobungakanani obugcweleyo kunye nomgangatho ukuya kwizipili zasesilingini.
Ubuncinci bobusuku obuthathu bufunekayo kwi-Ista, i-Queens Birthday, i-Weekend yezaBasebenzi kunye ne-Art Deco. Enkosi
Umbuki zindwendwe ngu- Ash
Siyavuya ke ngakumbi ukukwamkela okanye sinokushiya isitshixo ngaphandle. Sithumele umyalezo nangaliphi na ixesha ukuba ufuna nantoni na singabantu abanobuhlobo kwaye siyakuvuyela ukunika naliphi na icebiso okanye ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Siyavuya ke ngakumbi ukukwamkela okanye sinokushiya isitshixo ngaphandle. Sithumele umyalezo nangaliphi na ixesha ukuba ufuna nantoni na singabantu abanobuhlobo kwaye siyakuvuyela…